ချစ်သူ မြန်မာမလေးကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေး Mikis Weber – Swel Sone News
အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေး Mikis Weber ကတော့ မြန်မာပြည်ကို အရမ်းချစ်သူတစ်ဉီးပါ။ အချစ်မှာ ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေး Mikis တစ်ယောက် မြန်မာမလေး စုစုဝေနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုတွေအပြည့်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို နှစ်ကိုယ်တူပုံဖော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမလေးကို သဲသဲလှုပ်ချစ်တဲ့ Mikis ကတော့ လတ်တလောမှာ ချစ်သူကောင်မလေးကို ဘယ်လောက်ထိချစ်ကြောင်း ထုတ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေးကတော့ တော်တော်လေးကို အချစ်ကြီးတဲ့သူတစ်ဉီးပါပဲနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်သူကောင်မလေးကို ဘယ်လောက်ထိချစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေး Mikis Weber ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသားလေး Mikis Weber ကတော့ “လူစိမ်းနှစ်ယောက် စချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ သူဘယ်နေရာကလာတယ် သူဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ။ အချစ်က လူတိုင်းနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားပဲ ။ မင်း ဆင်းရဲးတာ ချမ်းသာတာ ဒါမှမဟုတ် မင်း ဖြူတာ ညိုတာ အစိမ်း အပြာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ရဲ့ ခံစားမှုက ဒီအတိုင်ပဲ….. ချစ်တယ် When2strangers fall in love, they don’t care where they are from or who they are. Love isalanguage that everyone understands. If you were poor or rich, white, brown, green, purple or blue, My feeling would remain the same for you 😘” ဆိုပြီး အချစ်က လူတိုင်းနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားပဲဆိုပြီး သူမဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာပါ။
အရမ်းကို လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲလေး…။
လူမျိုးမတူပေမယ့်လည်း မိသားစုတွေလို သံယောဇဉ်နဲ့ ရှေ့ဆက်နေကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးကတော့ နားလည်မှုတွေများစွာနဲ့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး အချစ်တြွေပည့်နှက်နေတာမို့ အရမ်းကို အားကျဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ Mikis Weber နဲ့ စုစုဝေတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ အခုဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်းလည်း နှစ်နှစ်ကျော်ရှိသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း မြန်မာမလေးကို သဲသဲလှုပ် ချစ်တတ်လွန်းသူကြီး Mikis Weber ကိုချစ်ရင် ဒီသတင်းလေးကို ဝေမျှသွားကြပါဦးနော်။
Source;Mikis Weber’s Facebook
မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်မရိုက်ဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်